Ahoana no famahanana ny marketing dizitaly amin'ny fantsom-pivarotana anao | Martech Zone
Rehefa manadihady ny vavam-pivarotana ny orinasa, ny ezak'izy ireo atao dia ny mahatakatra tsara kokoa ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpividy mba hamantarana izay paikady azon'izy ireo atao zavatra roa:
Size - Raha toa ny marketing dia afaka manintona vinavina bebe kokoa dia azo inoana fa hitombo ny fahafaha-mampitombo ny orinasan-dry zareo raha mijanona hatrany ny tahan'ny fiovam-po. Raha lazaina amin'ny teny hafa… raha manintona vinavina miisa 1,000 miaraka amin'ny dokambarotra aho ary manana taham-panovana 5% dia hitovy amin'ny mpanjifa 50 hafa izany.
fiovam-pony - Isaky ny dingana ao amin'ny fantsom-pivarotana, ny marketing sy ny varotra dia tokony hiasa hampitombo ny tahan'ny fiovam-po hahafahana mandroso prospect bebe kokoa amin'ny fiovam-po. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mahasarika an'io tombam-bidy 1,000 hafa io ihany aho nefa afaka mampiakatra ny tahan'ny fiovam-po ho 6%, dia hitovy amin'ny mpanjifa 60 fanampiny izao.
Inona no atao hoe cornel fivarotana?
Ny fantsom-pivarotana dia fampisehoana an-tsary ny isan'ny mety ho vinavinanao amin'ny varotra sy ny fikolokoloana ny vokatrao na serivisinao.
Na ny varotra na ny varotra dia samy miahiahy foana amin'ny fantsom-pivarotana, matetika miresaka momba ny vina azo amin'ny fantsona mamaritra ny fomba mety hahafahan'izy ireo maminavina ny fitomboan'ny vola miditra ho an'ny orinasany.
Miaraka amin'ny marketing nomerika, kritika ny fampifanarahana eo amin'ny varotra sy ny marketing. Tiako ity teny nalaina ity avy amin'ny iray amin'ireo podcast nataoko farany teo:
Ny marketing dia miresaka amin'ny olona, ​​ny varotra dia miasa amin'ny olona.
Ny matihanina amin'ny varotrao dia manana dinika sarobidy miaraka amin'ny vinavina isan'andro. Fantatr'izy ireo ny olan'ny indostrian'izy ireo ary koa ny antony mahatonga ny orinasanao tsy hahavery fifanarahana amin'ireo mpifaninana aminy. Miaraka amin'ny fikarohana sy famakafakana voalohany sy faharoa, ireo mpivarotra dia afaka mampiasa izany fampahalalana izany mba hanomezana sakafo ny ezak'izy ireo amin'ny varotra nomerika… miantoka fa ny vinavinan'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny fantsona dia manana atiny mpanampy hanampy ny prospect hiova amin'ny dingana manaraka
Dingana fandefasana varotra: Ahoana ny fomba ampiasan'ny marketing nomerika azy ireo
Rehefa mijery ny salantsalany sy ny fantsona rehetra azontsika ampidirina ao amin'ny paikadin'ny varotra ankapobeny isika, dia misy hetsika manokana azonay apetraka hampitomboana sy hanatsarana ny dingana tsirairay amin'ny fantsom-pivarotana.
Doka sy haino aman-jery nahazo mitondra fahafantarana ny vokatra sy serivisy omen'ny orinasao. Ny dokam-barotra dia ahafahan'ny ekipa mivarotra mampiasa ireo mpijery mitovy amin'ny tarika sy vondrona kendrena mba hanao doka sy hananganana fahatsiarovan-tena. Ny ekipan'ny haino aman-jery sosialy dia mety hamokatra atiny mahaliana sy mahasarika izay zaraina ary mitarika fahatsiarovan-tena. Ny ekipan'ny fifandraisanao amin'ny daholobe dia mametraka mpiorina sy haino aman-jery hahatratra mpihaino vaovao sy hanangana fahatsiarovan-tena. Azonao atao mihitsy aza ny mandefa ny vokatrao sy ny serivisinao hahazoana loka hampandrenesana ireo vondrona indostrialy sy famoahana.
Ahoana no fahalianan'ny olona amin'ny vokatrao na serivisinao? Amin'izao fotoana izao, matetika izy ireo dia manatrika hetsika, mandray anjara amin'ny vondrona indostrialy, misoratra amin'ny lozisialy manampy, mamaky lahatsoratra, ary mitady Google izay olana tadiavin'izy ireo vahaolana. Ny zanabola dia azo aseho amin'ny alàlan'ny tsindrio amin'ny alàlan'ny dokam-barotra na ny fanondroana izay mitondra vinavinan'ny tranokalanao.
Ny fiheverana ny vokatrao dia resaka fanombanana ny takiana, ny vidiny ary ny lazan'ny orinasanao miaraka amin'ireo mpifaninana aminao. Ity dia mazàna no dingana manomboka manomboka ny varotra ary mitarika mpitarika mahay (MQL) novaina ho mpitarika mitarika varotra (SQLs). Izany hoe, ny vinavina azo ampifanarahana amin'ny mombamomba ny demografika sy ny firmagraphic izao dia nalaina ho mpitarika ary ny ekipa mpivarotra anao dia manome azy ireo fahafaha-mividy sy ho mpanjifa lehibe. Eo no manan-talenta mahatalanjona ny varotra, manome tranga fampiasana, manome vahaolana ary mampihena ny olana rehetra ateraky ny mpividy.
Raha ny hevitro, ny dingana fikasana no zava-dehibe indrindra amin'ny fomba fijery ara-potoana. Raha mpampiasa mitady mitady vahaolana izy, ny fahamoram-panahinao misambotra ny mombamomba azy ireo ary manentana ireo mpiasan'ny varotrao hanenjika azy ireo dia manakiana. Ny karoka nampiasain'izy ireo dia nahatonga azy ireo hitady vahaolana. Ny fotoana famaliana fanampiana anao dia manakiana ihany koa. Eo no misy fiantraikany lehibe amin'ny taham-panovana ny click-to-call, ny form valiny, ny chat bots, ary ny bots mivantana.
Ny tombana dia ny dingana anangonana ny varotra fampahalalana betsaka araka izay azon'izy ireo atao mba hampilamina ny fanantenana fa manana vahaolana mety ianao. Mety tafiditra ao anatin'izany ny tolo-kevitra sy ny asa momba ny asa, ny fifampiraharahana amin'ny vidin-javatra, ny lining mena-fifanarahana, ary ny fandroahana ny antsipiriany hafa. Ity dingana ity dia nitombo tamin'ny vahaolana enablement sales nandritra ny taona vitsivitsy - anisan'izany ny signage nomerika sy ny fizarana antontan-taratasy amin'ny Internet. Zava-dehibe koa ny fananan'ny orinasanao laza malaza amin'ny Internet satria ny ekipan'izy ireo izay manangana marimaritra iraisana dia handavaka sy hikaroka ny orinasanao.
Ny fizotry ny fividianana seamless dia manan-danja tokoa amin'ny fizahana ecommerce ho an'ny tombotsoan'ny mpanjifa toy ny amin'ny orinasa orinasa. Ny fahaizana manoratra mora sy manangona ny vola miditra, mampita ny traikefa an-tsambo, mandefa fanantenan'ny fandefasana na fametrahana, ary mamindra ny vina ho lasa mpanjifa dia tokony ho mora ifandraisana.
Inona no tsy tafiditra ao amin'ny fantsona fivarotana?
Tadidio fa ny fifantohan'ireo fantsom-pivarotana dia ny famadihana ny prospect ho mpanjifa. Tsy mandeha mihoatra ny mahazatra izany na eo aza ny ekipa mpivarotra maoderina sy ny ekipa mpivarotra mamaly ny traikefan'ny mpanjifa sy ny filàn'ny fitazomana ny mpanjifa.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny fantsom-pivarotana dia fanehoana an-tsary ny ezaka ataon'ny ekipa mpivarotra sy marketing anao… tsy hita taratra amin'ny dia ny mpividy. Ny mpividy, ohatra, dia mety hivezivezy mandritra ny diany. Ohatra, ny prospect dia mety hitady vahaolana hampifangaroana vokatra roa ao anatiny.
Amin'izay fotoana izay dia mahita tatitry ny mpandalina momba ny karazana sehatra tadiavin'izy ireo ianao ary hahafantatra anao ho vahaolana mety. Nanomboka ny fahatsiarovan-dry zareo izany na eo aza ny fikasan'izy ireo.
Aza adino… ny mpividy dia miroso hatrany amin'ny fizotran'ny fizotran-tena amin'ny fanombanana ny fividianany manaraka. Noho io antony io, zava-dehibe ny fananan'ny orinasanao trano famakiam-boky feno votoaty hanohanana azy ireo amin'ny diany sy hitarihany azy ireo amin'ny dingana manaraka! Raha manao asa tsara ianao, dia hitranga ny fahafahana hahatratra bebe kokoa sy hiova fo bebe kokoa.
Tags: fantsom-barotra b2bfandinihanatombanafiniavanamahalianalevitraFanamafisana ny varotratandroka fivarotanadingana fandefasana varotraSQLinona ny fantsom-pivarotana